yakanakisa iphone 12 pro max inobata pa t-nhare, verizon, ku & t, bestbuy, kana kukiyiwa
Kuru Nhau & Ongororo Yakanakisa iPhone 12 Pro Max inoshanda paT-Mobile, Verizon, AT & T, BestBuy, kana kukiyiwa
Yakanakisa iPhone 12 Pro Max inoshanda paT-Mobile, Verizon, AT & T, BestBuy, kana kukiyiwa
Iyo iPhone 12 Pro Max - Apple & apos; s yakakura kupfuura dzose nhare - imhuka imwe ine simba. Mafoni ese ari maviri anouya neyakagadziridzwa dhizaini inounza ndangariro kumashure kune iyo iPhone 4 nguva. Kunze kwekunze kukuru kwekunze, iyo iPhone 12 yakateedzana unouya pamwe nemakamera akavandudzwa zvakanyanya, pamwe inokurumidza chipsetti chipset, uye yakafararira uye yakazara zvakakwana rutsigiro rwe5G pane chero foni.
Avo vasina kugutsikana zvizere ne 5.4'-6.1 'iPhones vangangoda kuenda kune iyo iPhone 12 Pro Max. Haingori chete iine skrini hombe ye iPhone, asi iyo kamera sensor ndiyo hombe Apple yakamboisa mufoni, futi.
iPhone 12 Pro Max kuongorora
iPhone 12 Pro / Max vs iPhone 11 Pro / Max
Ndeapi matanho akanakisa pane iyo iPhone 12 Pro Max, yakafanana neiyo akanakisa Prime Day madhiri kana Nhema dzeChishanu? Vatakuri uye vatengesi vakuru vanowanzo kupa zvidzikiso pane iyo iPhone 12 Pro Max, kunyanya kana iwe uine foni yekutengesa-mukati.
Tenga iyo iPhone 12 Pro Max kubva kuApple.com
Apple parizvino iri kupa yekutengeserana-mukutengeserana kweiyo iPhone 12 Pro Max. Unogona kusevha inosvika kumadhora mazana mashanu nemakumi maviri neshanu nekutengeserana-mukati. Pano, unogona kutenga iyo iPhone 12 Pro Max yakavhurwa, pamwe neyekutakura-yakavharwa paVerizon, AT & T, uye T-Mobile. Iyo yepamusoro yekutengesa-kukosha iwe yaunogona kuwana kubva kuApple ndeye iPhone 11 Pro Max iri mune yakanaka mamiriro ekushanda, uye mutengo unogona kukwira kusvika kumadhora mazana mashanu nemashanu. Kazhinji, nyowani iPhones dzekutengesa-mukati tora iyo yepamusoro-yekutengesa kukosha. Nekudaro, kunyange iPhones dzekare dzinogona kukuwanira mutengo wakanaka pane iyo iPhone 12 Pro Max. Semuenzaniso, kana iwe uine iPhone 7 iri mune yakanaka mamiriro ekushanda, unogona kukwira kusvika kumadhora makumi mapfumbamwe.
Simuka kusvika pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu neshanu nekutengesa-mune inokodzera iPhone kana nhare yeApple
Kutengesa-mukati$ 1099Tenga kuApple
iPhone 12 Pro Max inobata paVerizon
Kana zvasvika kune iyo iPhone 12 Pro Max, vashandisi vanokwanisa kuwana Apple & apos; s behemoth ye $ 36.66 / mwedzi pazvikamu makumi matatu zvemwedzi, kana $ 45.83 / mwedzi pazvikamu makumi maviri nezvina.
Kuwana iyo iPhone 12 Pro Max paVerizon kunogona kukuwanira iwo chaiwo akanaka mabhonasi, kunyanya kana iwe uine yakakodzera foni yekutengesa-mukati.
Heano maVerizon & apos; s iPhone 12 Pro Max inobata izvozvi:
Tenga Mumwe Tora Imwe: Tenga Imwe, simuka unosvika kumadhora 1000 pane imwe. Mutsva mutsva unodiwa.
Sevha $ 250 paPadad nekutenga iPhone
Sevha kusvika kumadhora 1000 paunoshandura (nekutengesa-mukati)
Sevha kusvika kumadhora mazana manomwe nekutengesa-mukati kwefoni
Chinja uye chengetedza kusvika kumadhora mazana matatu
Yemahara Verizon Stream TV promo kodhi kana iwe ukawedzera 4G kana 5G foni kungoro yako uye kumisikidza chero eUgumi zvirongwa.
BOGO, kana chinja, tengesa mukati uye chengetedza kusvika kumadhora chiuru, kana kutengesa-mune yakakuvadzwa foni - chengetedza kusvika kumadhora mazana manomwe
Kutengesa-mukati BOGO$ 109999 Tenga kuVerizon
AT & T iPhone 12 Pro Max inobata
Kunge iyo iPhone 12 Pro inobata , parizvino unogona kusevha inosvika kumadhora mazana manomwe paiyo iPhone 12 Pro Max ine inokodzera (iPhone 8 zvichikwira) kutengeserana-mukati uye kumisikidza chirongwa chakakodzera cheAT & T Unlimited. Nekudaro, subs vanokwanisa kuwana iyo iPhone 12 Pro Max ye $ 399 chete ($ 13.30 pamwedzi kwemwedzi makumi matatu), nepo iyo iPhone 12 Pro ichiwanikwa ye $ 299 ($ ​​10 pamwedzi kwemwedzi makumi matatu).
Mutengo wemwedzi wega wega unoratidza kubhadhara kwemwedzi pamwedzi, mushure mekushandisa kweTT & T kutengeserana-mune chikwereti inosvika kumadhora mazana manomwe yakashandiswa pamwedzi makumi matatu mushure mekushambadzira kweinokodzera smartphone ine hushoma $ 95 yekutengesa-muukoshi.
Inoda kukwidziridzwa kwetambo iriko (kana kumisikidzwa kwetambo nyowani muzvitoro) nekutengwa kweiyo nyowani iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, kana iPhone 12 Pro Max pane anokodzera 30-mwedzi 0 muzana APR yekumisikidza hurongwa.
inosvika kumadhora mazana manomwe nekutengesa
$ 700 yabviswa Kutengesa-mukati$ 399 $ 1099Tenga kuAT&T
iPhone 12 Pro Max inobata paT-Mobile
At T-Nhare , unogona kukwira kusvika pamadhora mazana masere kubva pa30 iPhone kubva paPro Max paunobatana nekutengesa-mune inokodzera iPhone. Kutengesa mu iPhone kubva pane gumi nemana akateedzana mune yakanaka mamiriro ekushanda, kana iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X kana iPhone XR inogona kukutorera mutengo kusvika kumadhora mazana masere nemakumi matatu. Izvo zvirinani mamiriro ekutengeserana-mu iPhone iri, iyo yakakwira iyo dhisikaundi iwe yaunowana kubva kuT-Mobile pane iyo iPhone 12 Pro Max.
Uyezve, vatengi vanokodzera (bhizinesi vatengi, futi!) Avo vanga vaine T-Mobile, kusanganisira Sprint, kwemakore mashanu + vanogona kuwana $ 200 rebate pane chero iPhone nyowani pavanotengesa kana kuendesa chero inoshanda iPhone pachirongwa chakakodzera.
iPhone 12 Pro Max inobata pa Best Buy
Zvakanakisisa Kutenga kazhinji zvine zvipo zvine rupo pafoni dzinopisa, uye izvozvi iyo iPhone 12 Pro Max inobata pa Best Buy yakanaka chose. Best Buy inopa iyo iPhone 12 Pro Max pane matatu makuru anotakura Verizon, AT & T, uye Sprint, uye ine hefty discounts pane iyo iPhone 12 nekutengesa-mukati.
Parizvino, Best Buy iri kupa inotevera iPhone 12 Pro Max yekushambadzira-mune zvinopihwa: une BOGO dhiri paVerizon, kana inosvika kumadhora mazana manomwe kubva kubhizimusi-rekutengeserana, inosvika kumadhora mazana masere paAT & T (nekutengesa-mukati), uye kumusoro kusvika kumadhora mazana masere nemakumi matatu paSprint / T-Mobile (nekutengeserana-mukati).
Pasina foni yekutengesa-mukati, kana ukatenga iyo iPhone 12 Pro Max paSprint / T-Mobile, ine tambo nyowani kana account uye ubhadhare zvizere, unowana madhora makumi mashanu kubva pamutengo we iPhone 12 Pro Max wekutengesa we $ 1099.99.
128GB, Sprint / T-Mobile, bvisa madhora makumi mashanu netambo nyowani kana account, kana chengetedza kusvika kumadhora mazana masere nemakumi matatu nekutengeserana.
$ 50 yabviswa (5%) Kutengesa-mukati$ 104999$ 109999 Tenga paGoodBuy
128GB, Verizon, Tenga Mumwe Tora $ 1000 kubva pane imwe, kana chengetedza kusvika kumadhora mazana manomwe nekutengesa-mukati
Kutengesa-mukati BOGO$ 109999 Tenga paGoodBuy
128GB, AT & T, chengetedza kusvika kumadhora mazana masere nekutengeserana mukati
Kutengesa-mukati$ 99999 Tenga paGoodBuy
Pano unogona kutarisa zvese nezve iyo iPhone 12 inopa paKutenga Kwakanyanya.
Ichi chinyorwa chinovandudzwa nguva dzose, saka usazeze kuisa bookmark iri peji uye wotarisa kumashure gare gare kune matsva iPhone 12 Pro Max madhiri pane makuru anotakura uye asina kukiyiwa.
Zvakare, usakanganwe kutarisa edu iPhone 12 Pro Max makesi uye masikirini ekudzivirira masarudzo kana iwe uchinge wawana yako nyowani iPhone 12 Pro Max:
samsung s6 kumucheto vs s7 kumucheto
Yakanakisa, yakapusa, uye inotyisa kwazvo vatambi veApple mukupera kwa2020
Nyowani iOS 14 maficha: Maitiro ekuisa pini hurukuro kumusoro kweMessage runyorwa